Yuusuf Kaba-kudukade “Itoobiyaanka waligood ma joojinayaan duulaanka ay Soomaaliya ku soo qaadeyso” – idalenews.com
Yuusuf Kaba-kudukade “Itoobiyaanka waligood ma joojinayaan duulaanka ay Soomaaliya ku soo qaadeyso”
Gudoomiyaha Al-Shabaab ee Gobolka Shabellaha Dhexe Sheekh Yuusuf Kaba-kudukade ayaa ka hadlay ka bixitaanka Ciidamada Itoobiya ee Soomaaliya, isagoo ka dhawaajiyay in been abuur ay tahay in Soomaaliya isaga baxayaan.
Hadalkiisa ayaa ka duwanaa hadalada saraakiisha Shabaab ay jeedinayeen oo ku aadanaa ka bixintaan Soomaaliya, isagoo xusay in Itoobiya ay ugu soo duuashay inay qbasato, damaceedana uu ahaa mid muddo soo jiray.
“Itoobiyaanka ma joojinayaan duulaanka waa inaan jihaadka sii xoojinaa, bixitaanka ay sheegayaan waa kaftan oo nalagu jahwareerinayo”ayuu yiri Sheekh Kaba-kudukade.
Dhinaca kale waxaa uu ka hadlay taageero ay ka heleen dadka ku dhaqan gobolka Shabellaha Dhexe, isagoo xusay inay dadka deegaanka ay iskood isugu qoreen lacago, isla markaana ay mujaahidiinta ugu yabooheen.
Mr Kaba-kudukade ayaa sidoo kale tilmaamay in dadka ku dhaqan gobolka ay kala ogaadeen waxa uu salka ku haayo duulaanka ay ku soo qaadeen waxa uu ugu yeeray Cadawga Afrikaanta.
Al-Shabaab ayaa dagaalo kula jirta ciidamada dowladda, AMISOM iyo Ciidamada Itoobiya oo haatan isu diyaarinaya inay isaga baxaan qeybo ka mid ah gobolada koofur galbeed.
Dowladda Britain oo ka digtay weeraro Argagixiso oo Al-Shabaab ka fuliyaan Muqdisho
Wabiga Shabelle oo ka fatahay deegaanka Maandheere ee degmada Jowhar